25 ezigbo mmerụ ahụ nke ndị Olympia
Ndị na-eme egwuregwu na-enwe mmerụ ihu mgbe niile. Nye ọtụtụ, ha na-aghọ ihe doro anya. N'ọtụtụ ọnọdụ, mmebi ahụ adịghị njọ, ọ na-ewekwa oge iji weghachi ha. Ma mgbe ufodu, mmerụ ahụ na-agba akpụ.
Na dịka omume na-egosi, ihe dị elu nke ị rụpụtara, ihe ka njọ bụ nke ị nwere ike inweta. Ndị Olympia mara nke a "ochichi" nke ọma, mana o gbalịrị ịlụ asọmpi ahụ. Ochioma, ozo, obughi ndi nile ndi ozo choro ohere ...
1. Lazaro Borges na osisi gbawara agbawa
N'egwuregwu Olympics na London, n'oge a na-agba ọsọ nke mita 5, Cuban mebiri ogwe. Ndị mmadụ na-ejide ume ha dịka Lazaro dara. N'ụzọ dị mma, onye na-eme egwuregwu ahụ rutere n'àkwà ahụ, ọ bụkwa nanị nganga ya kpatara ya.
2. Vincenzo Nibali nọ n'ihe mberede n'oge agbụrụ ahụ
Ịgba ígwè bụ n'ezie dị ize ndụ karịa ka o nwere ike iyi. Ịgbalị ịgafe ndị na-agba ọsọ, Italian Nibali, na-eme ngwa ngwa ma ghara ịnagide njikwa nke igwe kwụ otu ebe. N'ihi ya, Vincenzo mebiri ọkpụkpụ ya na ebe abụọ ma, n'ezie, pụọ na egwu ahụ.
3. Egwuregwu Olympic nke Samir Aita
Ọ bụrụ na ịchọrọ inye nwatakịrị ahụ n'ụlọ mgbatị, gụọ mbụ Samir. Onye na-eme egwuregwu na France amaghi adaba mgbe o mechara eme ihe ahụ ma mebie ụkwụ ya na ebe abụọ. N'ihi mmerụ ahụ, akụkụ nke ụkwụ ahụ gbagọrọ agbagọ na n'emeghị ihe ọ bụla. Mgbe ọ na-ahụ ya n'ihi na isi jidere ndị egwuregwu.
4. Ihe mberede Annemik Van Vlüten
N'ịbụ onye na-arịwanye elu, ndị na-agba ịnyịnya Dutch na-agbanye ọsọ ma daa n'ụgbọala ahụ. Annemik kpuchiri ihu ya, nwee mgbagwoju anya na ọnyá atọ nke ọkpụkpụ ya. N'ịhụ ihe mberede ahụ, nne nke onye egwuregwu ahụ chere na nwa ya nwanyị anwụọla. N'ụzọ dị mma, Annemik lanarịrị.
5. Nta nke Ellie Downey n'olu
Ka ọ dị afọ iri na asaa, Ellie ruru ọtụtụ ihe dị elu na ntụrụndụ. N'oge Olympic na Rio, o mere atụmatụ iji gosipụta nkà ya. Ma e nwere ọdachi. N'ịkọghị ike ya, Downey enweghị ike imecha mmega ahụ ma dakwasị n'isi ya. Onye na-eme egwuregwu gbalịrị ịchịkọta ike ma nọgide na arụ ọrụ ahụ, mana n'ikpeazụ ọ ghaghị ịchọ enyemaka nke ndị dọkịta.
6. Janos Baranyai na ndị dara ịdaba
Ịzụlite nnukwu ibu dị iche iche nwere nsogbu dị iche iche. Na Olympian Olympian n'oge ịgba aka nkuku wee si na nkwonkwo. N'ihi ya, Janos hapụrụ ụlọ mmanya ma daa. Ọ dabara nke ọma, onye egwuregwu ahụ enwetaghị mgbawa.
7. Nhụjuanya nye Nancy Kerrigan
Ndị na-esepụta ihe bụ Nancy Kerrigan na Tonya Harding bụ ndị isi. Iji kpochapụ onye ahụ, Harding kpebiri ịga mpụ. Di-ya nke di ya goro ndi ozo ndi na-eti Nancy aka ma merie ikpere ya. Onye egwuregwu ahụ apụghị ịnọgide na-asọmpi ahụ, ma na Olympia nke ọzọ, ọ nwetara akara ọlaọcha, Tonya weere ọnọdụ nke asatọ.
8. Ụda nke Sae Je Heck mmanya
Onye egwuregwu ahụ meriri ọlaedo na Beijing na Olympic n'egwuregwu Olympics na London, ọ chọrọ ikwughachi ihe ịga nke ọma ya. Ma, ọ dị mwute ikwu na ọ na - emeghachi ahụmahụ nke Janos Baranyai - kpochapụrụ ikpere ya ma tinye kilogram 170 kilogram.
9. Ahụhụ Kristen Maloney
Maka mgbakọ Olympic 2000, onye gymnast bịara na ọnọdụ okpomọkụ nke otu ụkwụ na ogwe aka ji arụ ọrụ. N'ezie, n'oge nkwarụ okwu ahụ adịghị agwọ, ma ọnọdụ Kristen mere ka njọ. N'ihi ya, Maloney mere ka ụkwụ ya daa ọzọ na mgbakọ na-eru eru ma hapụ agbụrụ ahụ.
10. Ọdịda nke Derek Redmond
Onye na-eme egwuregwu na onye na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu Derek Redmond gosipụtara oge kacha mma na njedebe ọkara ma nwee ike ikwu ọlaedo nke asọmpi ahụ. Ma na oge kachasị mkpa ọ na-enwe mkpịsị ụkwụ. N'ịhụ na onye ahụ na-eme egwuregwu na-akụda, ndị dọkịta chọrọ inyere ya aka, ma Derek kelere ma nọgide n'ọsọ ahụ. N'oge na-adịghị anya, nna ya bịara inyere ya aka. O nyeere Redmond aka iru akara, ma onye na-eme egwuregwu mere ka onye ikpeazụ mee onwe ya.
11. Achilles aka ọjọọ nke Liu Xiang
Nke a bụ otu n'ime ndị egwuregwu a ma ama-ndị na-eme egwuregwu na China. O nwekwara ike iru ọbụna elu ka elu, ghara ịdọ aka ya n'Ọkụ Olympic na Beijing na 2008.
12. Fall nke Dan na Hao Zhang
Iji nweta ndị Russia, ndị skaters si China kpebiri ịrụ mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya. Na mbido mbụ, Tribute dara nnọọ ada ma gbuo ikpere ya. N'ụzọ dị mma, okwu China na-ekwu na ọ ga-akwụsị n'ebe ahụ, ma ndị ikpe nyere Zhang aka ịmeghachi usoro ihe omume ahụ, ndị mmekọ ahụ wee ghọọ ndị dike, na-egosi ezi ụlọ ahụ.
13. Anwụrụ ụkwụ ụkwụ Kerry
N'Ogwuregwu Olympic na Atlanta na 1996, Kerry Straight mebiri nkwonkwo abụọ ma gbanye ụkwụ ya, ma ọ hapụghị agbụrụ ahụ. N'ịbụ onye meriri ihe mgbu ahụ, onye na-egwu egwuregwu ahụ gụchara ihe omume ahụ ma nweta isi ihe zuru ezu maka nrite ọlaedo nke ndị America.
14. Mantoe Mitchell na-agbaji ụkwụ ya na London
Ọbụna mgbe ụbụrụ ya gbawara, onye na-agba ọsọ ahụ nọgidere na-agba ọsọ. Manteo'spowerpower nyere ike na otu ma nyere aka na-enweta a ọlaọcha.
15. egwu egwu nke Paul George
Onye na-egwu bọl na-adabere n'enweghị ihe ịga nke ọma mgbe ọ kwụsịrị, ụkwụ ya na-egbukepụkwa akụkụ ya n'ezie.
16. Klyushka gbabara n'isi Katie Glynn
Osisi ahụ na-efega n'isi bụ ihe ikpeazụ onye ọkpụkpọ hockey na-achọ ịhụ. Ma nke ahụ bụ ihe Katie Glynn hụrụ na egwuregwu ndị London. N'ịbụ onyeisi ọbara, ọ dabara n'ọhịa, ma mgbe ọ kwụsịrị, ọ banyeghachiri n'ọgụ.
17. Mmetụta na John Selski
Onye na-egwu egwuregwu ahụ ji ogwe aka ekpe ya. Ejiri ọbara mechie obara. Ọ dabara nke ọma na ọ dịghị emetụ akwara ahụ, n'agbanyeghị nke a, Jọn ga-adọta 60 stitches.
18. Ogbugbu nke Mariela Scarone
Ihu Mariela daa n'okpuru mkpanaka hockey. Ihe niile mere ngwa ngwa na ọbara.
19. Greg Luganis merụrụ isi ya
Mgbe mmiri na-agba, Greg merụrụ ahụ ahụ. Onye na-egwu egwuregwu ahụ ga-amanye 9 seams. Ọfụfụ ahụ Luganis a na-agba n'Ọkụ Olympia ahụ nọgidere ruo mgbe ebighị ebi.
20. Adighi mgbochi Talgata Ilyasova
N'afọ 2004, a manyere onye mgba ahụ ịkwụsị ịsọ asọ n'ihi mmerụ ahụ. Mgbe a gbajiri agbaji Ozi ọma ji ọṅụ lọghachi n'egwuregwu Olympics na 2016, mana ebe a ka edobere ya maka ọdịda. N'oge agha mbụ, ọ gbapụrụ nkpere aka ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, onye egwuregwu ahụ kpebiri ịla ezumike nká.
21. Ọda na asọmpi Olympic na Sydney
Onye na-eme egwuregwu gọọmenti Hungary rụrụ usoro ahụ dum, mana na ngwụcha ikpeazụ ọ dara ma daa isi na mpe. Ihe ojoo ahu di ike nke na obi Adrienne kwusiri nkeji iri ato.
22. Nleta nke Andreas Toba n'oge a mara mma
N'oge arụ ọrụ mbụ ahụ, Toba tara ahụhụ na ọnya mgbagha. Ọ pụghị ịhapụ ogige ahụ n'enweghị onwe ya. Ma obere oge ka e mesịrị, izute mmụọ ahụ, Andreas laghachiri n'ihe ngosi ahụ ma mee ihe dị mma karịa ndị otu ya.
23. Ogwe dara ada nke Andranik Karapetyan
Ụzọ otu aka nke onye egwuregwu nke Armenia gbawara mgbe ọ na-anwa ime ka 195 gee ntị ọbụna ndị na-ekiri egwu na-ekiri mgbasa ozi ndụ.
24. Ọbara na Mmiri na Erwin Zador si Nsogbu
Onye na-egwu egwuregwu na-enweta ihe otiti site n'egwuregwu Russia. N'ihi nzere, ọdọ mmiri ahụ dum na-acha uhie uhie. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na na ọgụ a na 4 - 0, Hungary meriri.
25. Ihe na-egbu egbu nke Nodar Kumaritashvili
Onye na-agba ịnyịnya ahụ dara n'okporo ụzọ siri ike, tụba n'ime ogwe ígwè ma nwụọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị kwuru na e mepụtara ihe ngosi egwuregwu dị nnọọ ize ndụ, n'ikpeazụ, ndị ọkachamara kwuru na Nodar gburu n'ihi ezughị onwe ya.
Kpakpando iri na asaa nke metutara anyi n'omume yoga
20 ezigbo ihe mere ị ga-eji wepụ oge gị na ahụike
Ihe omuma na ihe di omimi banyere egwuregwu Olympic
Ike, ma ọ bụ ihe ndị mmadụ nwere ike ime
Mee ihe ndị a bara uru ma ghara ibu ibu, n'amaghị ụra!
13 ihe ị ga-aṅụ kọfị n'ụtụtụ
Kedu ihe ị na-eche n'echiche, mgbe ị na-ekiri igwe egwu
Rio 2016: oge ​​kachasị njọ ma na-emetụ n'ahụ
33 oge na-agba egwu na akụkọ ihe mere eme nke Summer Olympics
30 foto, lee ka o si sie ike ịlụ ọgụ oke
Di na nwunye di na nwunye iri ise na-eme ka ndi mmadu buru ndi mmadu n'anya
Ịgba ara na-adịghị mma, ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe na-agbanwe agbanwe mgbe afọ iri gasịrị
Nri oyi na-acha na-adị mma na ihe ọjọọ
13 ama ama ama ama emi ẹkebiomde
Ejiji uwe atụrụ sheepskin n'oge oyi-oyi 2015-2016
Ike na ụlọ
Ngwunye nke ihu
Margot Robbie bụ nwa nwanyị pụtara n'ihu agbamakwụkwọ nke enyi ya kacha mma
Kedu otu ngwa ngwa iji gbasaa?
Kedu ihe ị ga-eyi jaket uhie?
Cinchia - na-eto site na osisi
Agbamakwụkwọ na ụdị nke ndị omempụ
Kedu otu esi emeghe ụlọ ahịa ụlọ ahịa?
Cowberry - ọgwụ Njirimara
Egwu egbugbere ọnụ
Leningradsky rassolnik - uzommeputa
Izu itoolu nke afọ ime - nwa ebu n'afọ
Josh Hartnett na Tasmin Egerton ghọrọ ndị nne na nna ọzọ
Rihanna na oyiyi Pope na Met Gala 2018